Tag: CubeYou | Martech Zone
AddShoppers: Barmaamijka Adeegyada Bulshada ee Ganacsiga
Talaado, September 24, 2013 Talaado, September 24, 2013 Douglas Karr
Barnaamijyada AddShoppers waxay kaa caawinayaan inaad kobciso dakhliga bulshada, ku dar badhamada wadaagista waxayna ku siinayaan falanqeyn ku saabsan sida bulshada u saameyneyso ganacsiga. AddShoppers wuxuu ka caawiyaa bixiyeyaasha e-commerce adeegsiga warbaahinta bulshada si ay u sameeyaan iibsiyo badan. Badhamadooda wadaaga, abaalmarinta bulshada, iyo iibsiga barnaamijyada wax wadaagga ayaa kaa caawinaya inaad hesho saamiyada bulshada oo badan ka dibna u rogi kara iibka bulshada. Falanqaynta AddShoppers waxay kaa caawineysaa inaad la socoto soo noqoshadaada maalgashiga oo aad fahanto kanaalada bulshada u beddelaya. AddShoppers waxay kordhisaa kaqeybgalka macaamiisha iskudhafka